सहिदको राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि, तर चितामा टायर जलाएर? – MySansar
सहिदको राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि, तर चितामा टायर जलाएर?
Posted on March 13, 2017 March 13, 2017 by Salokya
भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को गोली लागी निधन भएका कञ्चनपुर पुनर्वास नगरपालिका–८ का गोविन्द गौतमको आज अन्त्येष्टि गरियो। नेपाल सरकारले गोविन्दलाई सहिद घोषणा गरिसकेको छ। उनको अन्त्येष्टि राष्ट्रिय सम्मानका साथ गर्ने निर्णय भए अनुसार प्रहरीले सलामी पनि दियो। कञ्चनपुरको दोदा नदी किनारमा गौतमको पार्थिव शरीरमा उनका ७२ वर्षीय पिता खेमलाल गौतमले दागबत्ती दिए। उनलाई राष्ट्रिय झण्डा ओढाइएको थियो। तर अन्त्येष्टिको फोटो हेर्दा एउटा कुरा भने चित्त बुझेन- चितामा टायर पनि राखिएको रहेछ।
नेपाल–भारत सीमाभन्दा निकै वर आनन्दबजारमा कल्भर्ट राख्ने विषयमा सुरु भएको विवादले उग्ररुप लिँदा एसएसबीले गत बिहीबार गौतमको गोली हानी हत्या गरेका थिए।
अन्त्येष्टि कार्यक्रममा कैलाली र कञ्चनपुरका सयौँ सहभागी भए। यसअघि धनगढीस्थित सेती अञ्चल अस्पतालबाट उनको शवयात्रा निकालिएको थियो । शवयात्रा धनगढी, डोकेबजार, चौराहा, त्रिनगर भन्सार हुँदै दोदा लगिएको थियो । उहाँको शव गृहनगर पुनर्वासमा श्रद्धाञ्जलिका लागि केहिबेर राखिने भनिएपनि समयअभावका कारण सिधै दोदा नदी किनार लगिएको थियो।
दोदा नदी किनारमा बनाइएको चिताको फोटो पनि सामाजिक सञ्जालमा देखियो। चितामा टायरको पनि प्रयोग गरिएको रहेछ। चितामा टायर जलाएर गरिएको राष्ट्रिय सम्मान भने चित्त बुझेन। के स्वास्थ्य र वातावरणमा समेत असर पर्ने गरी टायर नजलाई अन्त्येष्टि गर्न सकिँदैन थियो र?
2 thoughts on “सहिदको राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि, तर चितामा टायर जलाएर?”
Maharjan Tulsi says:
नेपालको राष्ट्रिय दाउरा भनेको टायर नै हो । सडकमा नि बालिने, चितामा नि बालिने, भत्तीमा नि बालिने ।